Kunzima ukucabanga isipho enkulu ngaphezu kwanoma yimuphi umkhiqizo esiliva, kungaba ubucwebe, tableware nezinsiza stylish. Yethula izingane - iyathinteka. Eminyakeni yamuva sekuwumkhuba ukunikeza izinto zenani, ngisho izinsana. Silver Spoon ingane - akuyona yinto emnandi? Okungenani ngokuba abazali bengane. Nokho, nabo ngokwabo ngokuvamile ukhathazeka ngokuthi ingabe ukuba ingane yabo u the best of konke, kuhlanganise izinto zokuqala - nezinkezo, izinkomishi sippy, Saucers.
Omunye angase athi: ikuphi ukuhlobana okukhona phakathi izingane ezincane namatshe ayigugu? I ngqo kakhulu, ngoba isiliva Sekuyisikhathi eside kwaziwa ngoba elwa namagciwane yayo kanye nezimpahla isinqandakuvunda. Isibonelo elula: amanzi ezitsheni zesiliva akusho ziwohloka izinyanga. Ngokufanayo, amanzi kusukela entabeni iziphethu, ayegcwele ion esiliva, zingagcinwa isikhathi eside futhi singalahlekelwa izimfanelo zalo zokwelapha. izitsha Isiliva Cutlery akuyona kuphela enhle, kodwa futhi ehlanzekile.
Ake ubuyele emuva khona ndoda omncane. Ayikho spoon frills izingane esiliva singamelwe. Akukhona yini ebaluleke kusukela ezinsukwini zokuqala zokuphila komntwana bayamhaqa ngezinto ezinhle, okuyinto futhi ukuvikela amagciwane? Into esemqoka - ukuze wenze izinqumo ezinhle: isiliva spoon ingane kufanele luhambisane yobudala bakhe. + Ngokwesibonelo, imvuthu osanda kuzalwa nje kudingeka ngesipuni esincane (hhayi ngaphezu ikhofi) ukuba uzodla lokuqala - iphalishi kanye amazambane okhamiwe wahlanganiswa. Futhi ngesikhathi ingane iqala uzama udle yena, zama konke ku izinyo, kumelwe usuvele unayo awayo: yayo isitsha, isidlo, ukuphuza isitsha, spoon. Esiliva, yebo. Nokho, uma ngesikhathi wakwazi ukuthenga kule sethi, futhi kungaba kakade ethulwa babazali bakho. spoon Isiliva usana kufanele kube ubukhulu esifanele, ngakho-ke kuyadingeka ukuba unake okukhethekile umklamo. Akwamukelekile ukuthi bekulokhu ngepeni ezicijile, okwe imiphetho ebukhali. Kufanele kube ukhululekile, hhayi ezishelelayo okuwathwala encane ingagcina wakhe.
Enye into ukuthi umklamo kufanele kube awazona efanelekayo kwentombazanyana noma umfana nge ethakazelisayo. Beautiful Cutlery - kuba iphango omuhle. nezinkezo Isiliva izingane futhi kungabanga isicelo, Umbhalo oqoshiwe uphawu yesikhumbuzo noma igama lengane. Ngelilodwa nje, kukhethwa kufanele athathwe ngokungathi sína, ngoba le ndaba siyohlala umkhaya kuze kube phakade, futhi mhlawumbe izinyane iminyaka eminingi sizobonisa izingane zabo.
Manje ngalokho spoon isiliva umntwana kuyoba into enhle ewusizo, futhi lapho kungenzeka ukulimaza impilo yabo. Ngeshwa, sengathi ukulawula izinga umkhiqizo nokudingekile inethiwekhi ukuhweba waqala ke ngobumnene, hhayi kakhulu onzima. Ngokuvamile i-okumsulwa Alloys esiliva kungenziwa ikhishwe womuntu ongabazisayo. A ingxubevange ewusizo ngempela - wesiliva nethusi umoya-mpilo-free. Zonke ezinye izinketho ingasetshenziswa eziyisikhumbuzo ubucwebe. abakhiqizi ngokuvamile lacquered ingxubevange, futhi kuba yingozi kakhulu ingane. Kuyacaca ukuthi kusuka isampula kuxhomeke kulokho izinga esiliva spoon ingane. ongavikela kanjani ngokwabo enkohlisweni nokutshontshwa zigqila eliphansi? Yinye kuphela indlela: cela nomthengisi isitifiketi inhlanzeko. Uma konke kuhamba kahle yini, khona-ke ungakwazi ekubekeni isisekelo eminye yimpumelelo ukuphila kid wamthenga kwetafula lakhe lokuqala amadivayisi metal zasebukhosini. Ake ke sikhule, sizungezwe izinto ezinhle!
Imincintiswano ezithakazelisayo izingane emcimbini lokuzalwa (iminyaka 5). I simo yomdlalo, siyakuhalalisela kanye nezinhlelo
Immunomodulating izidakamizwa "Derinat" izingane: imfundo kanye nencazelo
Yini okumele uyenze uma ingane vomits kaningi kangakanani?
Interior iminyango pine okuqinile
Yemidlalo Yeshashalazi Yase-Drama Russian. Lesia Ukrainka: incazelo, umlando, repertoire kanye nokubuyekeza
Indlela ukudayisa umkhiqizo?
Yini osebenza bee ibhu? Tincture: indlela isicelo
Four degree ukungezwani
Rubber wayibhinca - accessory ye jikelele